The Ab Presents Nepal » कुठाराघात !यूएईमा कार्यरत् नेपाली कामदारका आफन्तलाई जारी नहुने भयो ‘नो अब्जेक्सन लेटर’!
कुठाराघात !यूएईमा कार्यरत् नेपाली कामदारका आफन्तलाई जारी नहुने भयो ‘नो अब्जेक्सन लेटर’!
संयुक्त अरव इमिरेट्समा कार्यरत नेपाली कामदारका आफन्तहरूलाई पर्यटक भिसाका लागि सहमतिपत्र (नो अब्जेक्सन लेटर) जारी नगरिने भएको छ ।
अवुधावीस्थित नेपाली राजदूताबासले जुलाई १४ शनिबार एक सूचना जारी गर्दै आइतबारदेखि नै नो अब्जेक्सन लेटर जारी नगर्ने जानकारी गराएको हो । सूचनामा आफन्त भन्नाले श्रीमान् वा श्रीमती, आमा, बाबु, सासु ससुरा र छोराछोरी जनाइएको छ । नेपाली राजदूताबासले जारी गरेको यो सूचनाले यहाँका नेपालीमा अन्यौलको स्थिति सिर्जना भएको छ । अब के हुन्छ ? यस सूचनाले कसलाई फाइदा वा बेफाइला गर्छ ? के का लागि र कसका लागि यो निर्णय गरिएको हो ? यस्तै प्रश्नहरू यहाँ उब्जिएका छन् ।
यस सूचनाको प्रभावका बारेमा जानकार केही नेपालीले यो निर्णय सर्वसाधारण कामदारका लागि हितकर नभएको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनीहरूले यो निर्णय दुतावासले अध्यागमनमार्फत नमिलेका प्राविधिक कुराहरु र ठगी दलाली हुने ठाँउ खोजेर उचित उपचार गर्नुको साटो यो कदम चालिनु गलत भएको बताएका छन् ।
राजदूताबासको यस निर्णयका बारेमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा अबुधावीस्थित नेपालका राजदूत कृष्णप्रसाद ढकाल उपलव्ध भएनन् । एक अधिकृतले भने- यो अप्रिय निर्णय हो । यो निर्णयका ठूलो विरोध हुन सक्छ ।’ उनले अगाडि भने- यो निर्णयमा पुग्नुअगाडि अरू पनि कदम चाल्न सकिन्थ्यो ।